Moto Edge na Moto Edge + bụ ndị ọrụ: ngwaọrụ 5G ọhụrụ abụọ dị elu | Gam akporosis
Motorola ekpebiela ịrị elu na ngwaọrụ ọhụụ abụọ ọhụụ akpọ Moto Edge na Moto Edge +. The nzọụkwụ dị mkpa, niile mgbe ezi nnabata nke RAZR ọgba tum tum, otu ọkọlọtọ ọhụụ kachasị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ, dị ka akara G ka agbakwunyere n'etiti.
Moto Edge bụ obi umeala nke abụọ, nke Moto Edge + A na - enye ya vitamin n'akụkụ niile, site na CPU, ebe nchekwa, nchekwa yana ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị ịtụnanya. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ ahụ ezobeghi ozi site na ekwentị abụọ ahụ mgbe ha mechara nzukọ niile Edge ọmụma y nke Edge +.
0.1 Moto Edge, ihe niile gbasara ngwaọrụ ọhụrụ
0.2 Nnukwu njikọta
0.3 Nnweta na ọnụahịa
1 Moto Edge +, ihe niile gbasara ọhụụ ọhụrụ dị elu
1.1 Nnukwu njikọta maka Moto Edge +
Moto Edge, ihe niile gbasara ngwaọrụ ọhụrụ
Motorola chọrọ idobe akara mkpisiaka n'okpuru azụ "M", si otú ewepu na-arịgo ya n'okpuru ihuenyo dị ka ọtụtụ ndị ọzọ na mobile emepụta. Na Moto Edge na-ejikọta panel OLED nke 6,7-inch Na mkpebi FullHD +, nkwụghachi ume nke 90 Hz, akụkụ ahụ na-abata n'akụkụ, na nke a ọ nweghị HDR10 +.
Isi ihe nlereanya ahọrọwo maka ntinye nke mgbawa Ihe nhazi Snapdragon 765G egwuregwu gbakwasara, 4 ma ọ bụ 6 GB nke Ram na 128 GB nke nchekwa (gbasaa site na MicroSD). Batrị maka ihe nlereanya a bụ 4.500 mAh na 18W ngwa ngwa na-arụ ọrụ na sistemụ arụmọrụ dị ọcha gam akporo 19 na akwa mkpuchi ọhụụ akpọrọ My UX na ntinye nke Moto Actions.
Motorola Edge nwere ihe ntanetị anọ, ihe bụ isi bụ 64 MP nwere oghere f / 1.8, 16 MP ultra wide angle nwere ọhụụ 112º, telefon 8 MP na 2X mbugharị na nke ikpeazụ bụ ToF. Ugbua na ihu ọ na-agbakwunye igwefoto selfie 25 MP na oghere f / 2.0.
El Moto Edge nwere oke njikọ nke njikọ, na 5G, 4G, GPS, ụdị USB C, WiFi ac, NFC, Bluetooth 5.1, Dual SIM na 3.5mm jack headphone. Ewezuga nke a nwere asambodo IP54 megide uzuzu na mmiri.
Edge ọgba tum tum
IKIRU 6.7-inch OLED nwere mkpebi FullHD + - usoro 21: 9 - Ume ume: 90 Hz.
Nhazi 765G Snapdragon (8x Kryo 475 na 2.4 GHz)
Ohere TERLỌ N'IME 128 GB gbasaa na kaadi MicroSD
Ndị isi 64 MP f / 1.8 isi ihe mmetụta - 16 MP f / 2.2 obosara nke abụọ - 2 MP f / 8 telephoto (2.4x optical zoom) - TOF sensor | Ihu: 25 MP f / 2.0
Njikọ 5G - 4G - GPS - USB Type C - WiFi ac - NFC - Bluetooth 5.1 - Dual SIM - 3.5mm jack headphone
Atụmatụ ndị ọzọ Onye na-agụ akara mkpịsị aka azụ - IP54
El Moto Edge ga-abata na Spain site na June na agba abụọ dị iche iche: Solar Black na Midnight Magenta. Ọnụahịa nke ọnụahịa a bụ euro 599, mgbe ahụ ọ ga-abata na ọnwa ndị na-esote na ahịa ndị ọzọ dịka Asia na Latin America.
Moto Edge +, ihe niile gbasara ọhụụ ọhụrụ dị elu
Ọ bụ ọhụrụ elu-ọgwụgwụ ama si US, ọ na-ekpebi efego-agụ na azụ na akwụkwọ ozi "M" guzo n'azụ. Ihuenyo ahụ bụ otu, OLED nke 6,7-inch nwere mkpebi Full HD +, ọnụego ume ume 90 Hz, ndakọrịta HDR10 + na ọ nwere akụkụ gbara agba.
Moto Edge + na-akwalite ihe nhazi Qualcomm kachasị ọhụrụ, nke Snapdragon 865 arụmọrụ dị elu, 12 GB nke LPDDR5 RAM na 256 GB nke UFS 3.0 nchekwa, na-enweghị ohere ịgbasa ya. Batrị ahụ bụ 5.000 mAh ngwa ngwa na-agba ọkụ 18W, o nwere ikuku na-akwụ ụgwọ na 15W na ikuku na-akwụ ụgwọ na ntụgharị na 5W. Akụrụngwa bụ gam akporo 10 na My UX.
Dị ka Moto Edge, ihe mgbakwunyere Plus ga-enwe ese foto anọ n'azụ, ihe mmetụta bụ isi bụ 108 MP (na-ewere foto na 27 MP maka pixel na-ejikọ teknụzụ), 16 MP ultra wide angle, MP MP telephoto 8 MP na 3x mbugharị, ihe mmetụta TOF ma dekọọ vidiyo 6K na 30 FPS. Igwefoto n'ihu bụ 25 MP nwere oghere f / 2.0.
Nnukwu njikọta maka Moto Edge +
El Moto Edge + nwere 5G, 4G, GPS, ụdị USB C, WiFi ac, NFC, Bluetooth 5.1 na 3.5mm jack headphone. N'okwu a, gbakwunyere Plus na asambodo IP54, isi ihe nwere ike ịbụ ihe na-adịghị mma mgbe ọ na-anagide mmiri na ájá.
IKIRU 6.7-inch OLED nwere mkpebi FullHD + - usoro 21: 9 - Nwee ume: 90 Hz - HDR10 +
Nhazi Snapdragon 865 (1x Cortex-A77 na 2.84 GHz - 3x Cortex-A77 na 2.42 GHz - 4x Cortex-A55 na 1.8 GHz)
Ohere TERLỌ N'IME 256 GB nke UFS 3.0
Ndị isi Isi ihe mmetụta nke 108 MP f / 1.8 OIS - Secondary Ultra wide angle / 117º) 16 MP f / 2.2 - Telephoto (3x optical zoom) 8 MP f / 2.4 OIS - ToF sensor - Dekọọ 6K vidiyo na 30 FPS | Ihu: 25 MP f / 2.0
UMUAKA 5.000 mAh na 18W ngwa ngwa na-ebugharị na 15W wireless wireless.
Njikọ 5G - 4G - GPS - USB Type C - WiFi ac - NFC - Bluetooth 5.1 - 3.5mm jack headphone
El ọhụrụ Moto Edge + ga-abata na mba dị iche iche nke Europe site na ọnwa nke Mee na Smokey Sangria na Thunder Gray agba. Ọnụahịa nke flagship bụ euro 1.199.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Moto Edge na Moto Edge + bụ ndị ọrụ: Ngwaọrụ 5G ọhụrụ dị elu
Storelọ Ahịa Play nwere nsogbu arụmọrụ na mba ụfọdụ